Ma yahay adkeysi jimicsi iyo maxay yihiin jimicsiyada ugu fiican | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Ku habboon, nololeedka
Jidhkeenu wuxuu leeyahay awood uu ku jimicsado dhinacyada tamarta kaladuwan. Iska caabbinta jirka ee nooc ka mid ah kicinta ama jimicsiga ayaa loo qaybiyaa laba nooc. Marka hore, waxaan leenahay adkeysiga anaerobic ka dibna adkeysiga aerobic. Maanta waxaan diiradda saari doonnaa boostada caabbinta hawada. Tani waa kartida aad u yeelan karto inaad si joogto ah u qabato waxqabad ama shaqo inta ugu badan ee suurtogalka ah.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato adkeysiga aerobic, kani waa boostadaada.
1 Waa maxay adkeysiga jimicsiga
2 Himilooyinka tababarka
3 Layli jimicsiga jimicsiga
4 Sida loo hagaajiyo adkaysiga jimicsiga
Waa maxay adkeysiga jimicsiga
Adkaysiga jimicsiga jirka waa awoodda uu ugu adkeysan karo jimicsi ama dadaal waqti cayiman. Gaar ahaan, waxaan tixraaceynaa awoodda jirku u leeyahay inuu abaabulo dheelitirka gudaha ee oksijiinta jirka oo dhan. Neefsashada ayaa aasaas u ah tan. La'aanteed ogsijiin ama awood aad kubixin karto, ma awoodi doontid inaad jimicsi dheer kudarsatid ama aad iskudajisid.
Laxanka jimicsiga ayaa sidoo kale muhiim u ah adkeysiga aerobic. Tusaale ahaan, Maahan isku mid in lagu ordo 9 km / h halkii laga dhigi lahaa 14 km / saacaddii. Xawaarahaan labaad wuxuu noqon lahaa orod. Inta lagu gudajiro orodka, awooda jirku u qaybiyo oksijiinta ayaa hooseysa, maadaama baahida jirta ay ka sareyso.
Jidhkeenu wuxuu cunaa oksijiin ka timaadda hawada si uu awood ugu yeesho inuu bilaabo dhammaan hababka lagu jebinayo maaddada gulukoosta. Tani waa sida aan ku heli karno tamar kiimiko ku filan oo aan ku noolaan karno. Kaliya maahan jirku inuu iskudayo inuu noolaado, waa inuu sidoo kale sameeyaa shaqada maalinlaha ah.
Markaad culeys saarto jirka, tamar ayaa la baabi'iyay taas oo lagu keydiyay qaab molikiyuuleyaal ah ATP. Si muruqyada ay u shaqeeyaan oo jirka intiisa kale ay u oksijiiyaan, waa inaad shaqeysaa oo aad isticmaashaa molikulayadan aad tamar ugu beddeleyso. Haddii awooda jidhku ugu qaybiyo dhiigga oksijiin ay bilaabato inay fashilanto ama aan loo qaybin si ku filan horumarinteena ama adkaysiga, waxaa yaraanaya tamarta la heli karo waana marka waxa loo yaqaan daalku uu nagu bilaabmo.
Daalku waa cunsur nagu qasbaya inaan joojino dadaal ama jimicsi aan wadno. Sidan oo kale, maaddaama caabbinta aerobic ka weyn tahay, Waxaan dib u dhigi karnaa imaatinka daalka illaa iyo inta aan kari karno oo aan adkeysan karno dadaalka muddo dheer annaga oo aan oksijiin naga dhammaan.
Marka qofku tababbarayo si uu u hagaajiyo waxqabadkiisa, waxa uu isku dayo inuu kordhiyo ayaa ah awooddan uu ku qaato inta ugu badan ee suurtogalka ah inuu sameeyo jimicsi, daahiyana daalka. Tusaale ahaan, qofka orda maratoonka wuxuu isku dayaa inuu hanto inta ugu macquulsan, si hufan ugu qaybiya ogsijiinta dhiiga si uu jirka u gaaro sida ugu macquulsan. Si loo kordhiyo adkeysiga aerobic, jimicsiyo kala duwan oo ku lug leh nidaamka wadnaha-neefsashada waa in lagu sameeyaa iyadoo la soo celcelin iyo joogteyn gaar ah leh. Jimicsiyadaan waxaa loo yaqaan layli jimicsi.
Jimicsiyada jimicsiga waxaa badanaa lagu gartaa iyadoo la soo bandhigayo xoog hooseeya laakiin waqti dheer. Ku orodku waa shay xoogaa yar. Si kastaba ha noqotee, waad ku orodsan kartaa 1 saac. Inta lagu jiro waqtigan aan socono, jidhku wuxuu ubaahanyahay inuu sifiican ugudaro dhiiga oksijiinta jirka oo dhan. Tani waa sida aan u maareyneyno inaan daboolno baahidaan oksijiinta ee kordhay oo aan u oggolaano muruqyada inay si sax ah u shaqeeyaan.
Layli jimicsiga jimicsiga
Waxaan qori doonnaa oo kor ku sharixi doonaa jimicsiyo qaarkood oo ka faa'iideysanaya adkeysiga aerobic.
Dabaasha Dabaasha waa isboorti hagaajisa awoodda sanbabada waxayna caawisaa muruqyada shaqada. Waxaa jira muruqyo badan oo ku lug leh layligan. Tusaale ahaan, si aad ugu adkeysan karto dhererka barkadaha, waa inaad lahaataa awood qeybin oksijiin oo wanaagsan jirka oo dhan. Ku Waxtarka dabaasha way badan yihiin, sidaa darteed way mudan tahay in laga shaqeeyo.
aerobics. Aerobics waa kal-fadhi dhaqdhaqaaqyo qiiro leh. Dhaqdhaqaaqyadan waxaa weheliya muusig oo jirka oo dhan ku haya dhaqdhaqaaq joogto ah. Sidan oo kale, wadnuhu wuxuu ku garaacayaa qiime sare laakiin si joogto ah.
Soco In kasta oo ay umuuqato wax gebi ahaanba fudud, socodka degdega ah iyo qaadida tillaabooyin fara badan waa layli aad u fiican oo lagu gubo kalooriyada isla markaana qaab ahaan loo ekaado. Waa inaad ugu yaraan ku socotaa nus saac saacad xawaare fiican. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale isku dari kartaa nashaadaadka socodka firaaqada, socodka iyo dalxiisyada sida socodka.
Ku orod Waa fiditaan u dhexeeya orodka iyo socodka. Waxay saameyn badan ku leedahay jirka marka loo eego socodka iyo garaaca wadnaha oo sareeya. Sidaa darteed, waa baahi badan oo oksijiin ah. Haddii orodka si sax ah loo samayn, wuxuu dhaawac u geysan karaa jilbaha iyo kala-goysyada hoose. Sidaa darteed, si aad si sax ah ugu ordid waqti dheer iyo maalinba maalinta ka dambeysa, waxaa fiican inaad si wanaagsan isu diyaariso haddii kale ay jiri doonaan dhaawacyo suurtagal ah.
Baaskiil Nooc kale oo jimicsi oo aad u xiiso badan. Waa wax soo jireen ah. Waxaan ku sameyn karnaa labadaba baaskiil caadi ah iyo baaskiil istaati ah goobta jimicsiga. Haddii aan jecel nahay inaan raacno baaskiil wadid ama aan tababarno si aan u tartanno, waa layli weyn oo lagu hagaajinayo xariiqdeenna hoose oo aan ku helno adkeysi aerobic ah.
Xadhig Fure. Wax aad ku arki doonto jimicsiyada saacadaha oo dhan. In kasta oo marka hore loo qaadan karo inay tahay wax carruurnimo, haddana waa jimicsi weyn oo jimicsi leh oo leh horumar. Layligan, waxaad jidhkaaga ku haysaa hakad joogto ah. Waxaad cagahaaga si tartiib tartiib ah ugu riixaysaa dhulka oo aad sameysaa dadaal joogto ah. Dadaalkan waxaad isticmaaleysaa muruqyada hoose iyo kuwa kore.
Sida loo hagaajiyo adkaysiga jimicsiga
Si loo wanaajiyo awooddaada inaad u adkeysato jimicsiga muddo dheer, waxaa ugu wanaagsan in la bilaabo tababarka u dhexeeya. Waqtiyadaha aad ugu caadeyso jirkaaga inuu maro xoog ku filan, laakiin waxaad leedahay daqiiqado nasasho. Si tartiib tartiib ah oo joogto ah, waxaad awoodi doontaa inaad aragto sida waqti kasta oo aad awoodo inaad waqti badan ku bixiso jimicsiga adigoon nasin.
Tusaale ahaan, socoshada nus saac oo u dhexeysa 1 daqiiqo oo orod ah iyo mid kale oo dhakhso u socda. Kulan kasta oo aad sameyso, yaree inta u dhexeysa nasashada. 15 maalmood gudahood, waxaad awoodi doontaa inaad socodsiiso 30ka daqiiqo adigoon u baahnayn inaad nasato.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku horumarin karto oo aad wax badan uga ogaan karto dulqaadka aerobic.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Cadaadiska hawada
Loogu talagalay Bermuda